U Gaar Dumarka , Farriin Ku Haboon In Loo Diro Nin Jaceyl Kugu Cidleeyay - Hablaha Media Network
U Gaar Dumarka , Farriin Ku Haboon In Loo Diro Nin Jaceyl Kugu Cidleeyay
HMN:- Farriintani waxay kaaga imanaysaa qof kuu furtay laabteeda, kula qaybsatay dhibtaada, kuu gargaartay goortaad u baahnayd, ku difaacday markaad maqnayd, ku dareensiisay inaanad kali ahayn, kaala qayb qaadatay farxadaada si ay u laban laabanto iyo murugadaada si ay u fududaato, dhagaysatay cabashooyinkaagii, tunkana u ridatay gefafkaagii.
Hadda ayuun baan ka soo miiraabay miyir doorsoonkii aan maalmahanba ku sugnaa, oo aan soo sare fadhiistay. Asxaabtii igu hareeraysnayd ma waydiin muxuu sidaa iigu sameeyay ee waxaan su,aalay: Tolow hadda xaalkiisu waa sidee?
Waydiintani inta ay af-kala qaad ku noqotay ayay indhaha isaga tebiyeen farriin dulucdeedu daar-nayd Naa heedhe, way ku khafiiftay walaal.
Waxaanse kuu sheegayaa inaanan kugu khafiifin,ee aan u qaadan laayahay tallaabada naxdinta leh ee aad ku boqna goysay jacaylkii aynu caruurnimo ku abaqaalnay.
U qaadan laayahay sida aad u baylihisay barashadeenii iyo maalmihii bilnaa ee aynu soo wada qaadanay. Una ilowday maalmihii adkaa ee noloshaada soo maray iyo sidii naf hurka lahayd ee aan kuu garab istaagay.
Maxaad laabtayda ku ilmaysay adiga oo xanuun la taag daran igana dalbatay inaanan waligay garabkaaga ka maqnaan.
Maxaan habeeno la gam,i waayay cishqiga aan kuu hayay ee miranaayay qalbigayga?
Hoogayga,e, haddii aad iga dal-doorsanayso, maxaad iigu abuuraysay jacaylkan xanafta iyo xanuunka kulul? Maxaad iigu ababinaysay beeraqan iyo boholyowgan aan kuu qabo?
Maxaad iigu habaysay haasaawe macaan iyo hadal halaasi ah oo haween laga wada raacay? Maxaad wadnahayga ugu diidanayd inay cid kale kula wadaagto?
Goortii aad hantiday qalbigayga, huwatayna laabtayda, maxaad u halakaysay naftaydii taagta darnayd?
Alla maxaad beer-nugaylka kalgacalkaagu i baday ka faaiidaysatay oo aad asxaabtayda hortooda hadal qalbiga damqaya igu tidhi, anna aan iska dhega tiray sidii qof aan maqlayn. Maxaa dartaa iyo illaalinta axdigeena doqon laygu sheegay, dammiin la igu xantay, dadna aanu ku kala dhiman gaadhnay. Haddaba, Jacaylkii dhiiranaa, ee guyaalka aynu dhisaynay,dhibtana aan u marnay, dhammaadkiisii maxaad, dhimashadaa ula jeclaatay?
Naftaydii kuu hilowday, ee aad halyaygeeda ahayd, bal maxaad uba hiiftay, oo huqdaa aad u baday? Laabtaydii magacaaga, annigoo gabadha, oon garanaynin jacayl, guyaal aan ku xardhaayay, guulaheena ogaa, adna aad garanaysid, bal maxaad u giriiftoo, gebigaa uga tuurtay?
Mise wada jirkeeniyo, jacaylkii dhexdeeniyo, maalmihii na soo maray waxay ahaayeen kuwa caadifada sindheernimo aan ku qaboojinaynay? Kuwa aan dhaafsiisnayn, dhayal la isku salaaxiyo, afkoo layska yar dhuuqiyo, bushimahoo laysku dhaweeyiyo, macaankii dhunkasheed? Kolay, kulama yaabani oo waxaad noqotay dhadhamo raac, taasaana keentay inaad Baasaboor iga raacdo oo aad curyaamiso jacaylkii guyaal dhexdeena ka ilmo roganayay. Waayo, waxaad ku talo jirtaa hirgalinta himiladaadii dhoof jacayl. Laakiin maanka gali, maalin baa iman doonta aad qiimigayga dhabta iyo sida qof iyo Baasaboor u kala qaalisan yihiin duruuf kasta oo jirta aad ogaan doonto.
Haddaba gacalihaygii horoow, maqalka guurkaagu wuxuu gilgilay gudahayga, waxaanu gantaalo sumaysan ku ganay laabtaydii ladhka jacaylkaagu jiifay.
Waxaanu galalafay habsami u socodka tacliintayda oo bil kama ag wareegin Jaamacaddii. Waxaanan baadhayay dhibta aan kugu sameeyay ee sababay kala tageena.